Ukungezwani komzimba ne-Pollen - GAAPP
Ikhaya>Izinhlobo zokwaliwa komzimba>Impova yokungezwani komzimba
Impova yokungezwani komzimbaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-27T11:03:37+02:00
Iyini impova yokungezwani komzimba?
Impova ingenye yezimbangela eziyinhloko zokungezwani komzimba nokuphefumula (njenge-asthma noma i-rhinitis) kanye ne-conjunctivitis. Siqukethe izinhlayiya ezikhiqizwa izihlahla nezitshalo ngesikhathi sokuqhakaza, ezikhishwa ukuze kuvundiswe ezinye izihlahla noma izitshalo. Impova ihamba emoyeni ikakhulu, okuyilapho ibanga khona izinkinga zokungezwani komzimba. Abantu abaningi bazi ukungezwani komzimba nempova ngokuthi “hay fever.” Ochwepheshe bavame ukubiza impova yokungezwani komzimba nokuthi “i-rhinitis eyaliwa yisizini”.
Utshani yizimbangela ezivame kakhulu zokungezwani komzimba. I-Ragweed iyimbangela enkulu yokungezwani nokhula. Izinhlobo ezithile zezihlahla, kufaka phakathi i-hasel, alder, birch, umlotha nakwezinye izindawo zemisedari ne-oki, nazo zikhiqiza impova ene-allergenic kakhulu.
Abantu abanokungezwani komzimba nempova banezimpawu kuphela lapho ama-pollens ayizwani nawo esemoyeni.
Izimpawu ezivame kakhulu yilezi:
Ikhala namehlo alumayo. Kwesinye isikhathi izindlebe nomlomo
Impumu eminyene (isiminyaminya samakhala)
Amehlo abomvu namanzi
Izimpawu nazo zingabangelwa ukucasula okuvamile njenge:
Iphunga elinamandla, njengamakha, noma isifutho sezinwele nentuthu
Izinsipho zokuwasha izingubo
Izixazululo zokuhlanza, ukuqeda imoto nokunye ukungcola komoya (i-ozone)
Kunezinhlobo ezimbili ze-rhinitis yokungezwani:
Isizini: Izimpawu zingenzeka entwasahlobo, ehlobo nasekuqaleni kokuwa. Imvamisa zibangelwa ukuzwela kwempova evela ezihlahleni, otshanini noma okhuleni noma ezinhlakeni zesikhunta ezisemoyeni.
Okungapheli: Izimpawu zenzeka unyaka wonke futhi ngokuvamile zidalwa wukuzwela izibungu zothuli, izinwele zezilwane noma idander, amaphela noma isikhunta.
Udokotela wakho angancoma ukuhlolwa kwesikhumba, lapho amanani amancane ezinsolo ezisolwayo efakwa esikhunjeni sakho. Ukuhlolwa kwesikhumba kuyindlela elula, ebucayi kakhulu futhi ebiza kakhulu kunazo zonke yokuhlonza okokualiwa.
Ukuhlolwa kwegazi kuyasiza lapho abantu benenkinga yesikhumba noma bethatha imithi ephazamisa ukuhlolwa kwesikhumba. Zingasetshenziswa nasezinganeni ezingase zingakubekezeleli ukuhlolwa kwesikhumba.
Ukuhlolwa Kwegazi Okukhethekile kwe-IgE
Ukwelashwa Kwe-Pollen Allergy
Isinyathelo sokuqala nesibaluleke kakhulu ekulawuleni ukungezwani komzimba nokugwema i-allergen. Kunezinhlobo zemithi ethengwa ngokweqile kanye nemithi kadokotela yokusiza ukwehlisa impova izimpawu zokungezwani komzimba.
I-Corticosteroid nasal spray.
Abamelene neLeukotriene receptor
Abantu abaningi abanazo izimpawu ngokuphelele ngale mithi. Bangaba ukhetho lwe-immunotherapy. immunotherapy iguqula inkambo yesifo esingezwani nokuguqula ukusabela komzimba ekulweni nezifo.
I-Subcutaneous Immunotherapy (SCIT) - Ama-Allergy Shots
I-Sublingual Immunotherapy (SLIT) kumathebulethi noma oketshezi
Hlala endlini ngangokunokwenzeka lapho ukubalwa kwempova kuphezulu kakhulu, imvamisa ngezikhathi zantambama nakusihlwa kakhulu. Sebenzisa ukufakwa komoya emotweni yakho nasekhaya okunamathiselwe kwesihlungi se-HEPA. Hlola isihlungi se-pollen emotweni yakho bese uvala amawindi ngenkathi ushayela.
Gqoka izibuko noma izibuko zelanga lapho ungaphandle ukuze unciphise impova ingena emehlweni akho
Gqoka izigqoko ezinomphetho obanzi. Lokhu kuzosiza ukuvimbela impova ezinweleni zakho.
Qala ukuthatha imithi yokungezwani komzimba ngaphambi kokuqala kwenkathi yempova. Imithi eminingi yokungezwani komzimba isebenza kahle kakhulu uma ithathwa ngale ndlela. Lokhu kuvumela umuthi ukuvimbela umzimba wakho ekukhishweni i-histamine namanye amakhemikhali adala izimpawu zakho.
Geza izinwele zakho nsuku zonke ngaphambi kokulala. Lokhu kuzosusa impova ezinweleni zakho nasesikhumbeni sakho bese kuyigcina ikude bedding.
Ungashintshi izingubo ezigqokiwe ngenkathi kwenziwa imisebenzi yangaphandle egumbini lakho lokulala
Geza beddukungena emanzini ashisayo anensipho kanye ngesonto.
Musa ukulengisa izingubo ngaphandle ukuze zome; impova inganamathela elondolo. Sula izingubo zakho kumshini wokomisa izingubo.
Gqoka isifihla-buso se-pollen lapho ugunda utshani, ucwenga amaqabunga noma wenza ingadi, futhi uthathe imishanguzo efanele ngaphambi noma okungcono, vumela umsebenzi owenziwe ngomunye umuntu.
Nciphisa ukuthintana okusondelene nezilwane ezifuywayo ezichitha isikhathi esiningi ngaphandle.
I-allergen rhinitis ingahlotshaniswa ne:
Ukwehla kokugxila nokugxila
Izinkinga zokukhumbula izinto
Izinsuku ezingekho zomsebenzi noma zesikole
Izingozi eziningi zezimoto
Ukulimala okuningi esikoleni noma emsebenzini
I-allergen rhinitis inomthelela omkhulu kuzinga lempilo.